प्रशासनिक कानून | Law & More | आइन्डहोभेन र एम्स्टर्डम
प्रशासनिक कानून नागरिकहरु र सरकार को लागी व्यवसाय को अधिकार र दायित्व को बारे मा छ। तर प्रशासनिक कानूनले कसरी सरकारले निर्णय लिन्छ र यदि तपाईं त्यस्तो निर्णयसँग असहमत हुनुभयो भने तपाईं के गर्न सक्नुहुनेछ भनेर पनि नियमन गर्दछ। सरकारको निर्णय प्रशासनिक कानून मा केन्द्रीय छन्। यी निर्णयहरूले तपाईंको लागि टाढाको परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ। यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं तत्काल कारबाही लिनुहुन्छ यदि तपाईं सरकारी निर्णयसँग असहमत हुनुहुन्छ जुन तपाईंको लागि खास परिणामहरू छन्…
सरकार संग कन्फ्लिक्ट?
एक प्रशासनिक कानून वकील मा कल गर्नुहोस्
प्रशासनिक कानून नागरिकहरु र सरकार को लागी व्यवसाय को अधिकार र दायित्व को बारे मा छ। तर प्रशासनिक कानूनले कसरी सरकारले निर्णय लिन्छ र यदि तपाइँ त्यस्तो निर्णयसँग असहमत हुनुभयो भने तपाइँ के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि नियमन गर्दछ। सरकारको निर्णय प्रशासनिक कानून मा केन्द्रीय छन्। यी निर्णयहरूले तपाईंको लागि टाढाको परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ। यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले तत्काल कारबाही गर्नु भयो यदि तपाईं सरकारी निर्णयसँग असहमत हुनुभयो जुन तपाईंको लागि केही खास परिणामहरू छन्। उदाहरण को लागी: तपाइँको परमिट खारेज वा तपाइँको विरुद्ध एक प्रवर्तन कार्य लिईनेछ। यी परिस्थितिहरू छन् जसमा तपाइँ आपत्ति गर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि तपाईको आपत्ति अस्वीकृत हुन सक्ने सम्भावना छ। तपाइँसँग अपील कानून दर्ता गर्ने र तपाइँको आपत्ति अस्वीकृतको बिरूद्ध पनि अधिकार छ। यो अपीलको सूचना पेश गरेर गर्न सकिन्छ। को प्रशासनिक वकिल Law & More यस प्रक्रियामा तपाईंलाई सल्लाह दिन र सहयोग गर्न सक्छ।
> सामान्य प्रशासनिक कानून ऐन
> प्रशासनिक पर्यवेक्षण
> सरकारी दायित्व
> प्रशासनिक कानून मा म्याद
सामान्य प्रशासनिक कानून ऐन
सामान्य प्रशासनिक कानून ऐन (Awb) प्राय जसो प्रशासनिक कानून मामिलाहरूमा कानुनी रूपरेखा बनाउँदछ। सामान्य प्रशासनिक कानून ऐन (अउब) ले कसरी सरकारले निर्णयहरू तयार पार्नुपर्दछ, नीति प्रकाशित गर्नुपर्दछ र कुन प्रतिबन्धहरू कार्यान्वयनका लागि उपलब्ध छन् भनेर तल दिइन्छ।
तपाईं प्रशासनिक कानूनको साथ सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईंलाई परमिट चाहिन्छ भने। यो उदाहरणका लागि, वातावरणीय अनुमति वा रक्सी र आतिथ्य अनुमति हुन सक्छ। अभ्यासमा, यो नियमित रूपमा हुन्छ कि अनुमतिका लागि आवेदनहरू गलत तरिकाले अस्वीकार गरियो। नागरिकहरूले आपत्ति गर्न सक्दछन्। अनुमतिमा यी निर्णयहरू कानुनी निर्णयहरू हुन्। जब निर्णय लिन्छन्, सरकार नियमहरू द्वारा बाध्य हुन्छ जुन सामग्री र तरीकाले निर्णय लिइन्छ। कानूनी सहयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ यदि तपाईं आफ्नो अनुमति निवेदन अस्वीकार गर्नुभयो भने। किनभने यी नियमहरू कानूनी नियमहरूको आधारमा बनाइएको छ जुन प्रशासनिक कानूनमा लागू हुन्छ। वकिललाई संलग्न गराएर, तपाईं पक्का हुन सक्नुहुन्छ कि प्रक्रिया सही रूपमा एक आपत्तिजनक घटनामा वा अपीलको घटनामा अगाडि बढ्नेछ।
केहि केसहरूमा आपत्ति दर्ता गर्न सम्भव छैन। कार्यवाहीमा यो उदाहरणका लागि ड्राफ्ट निर्णय पछि राय पेश गर्न सम्भव छ। एक राय एक प्रतिक्रिया हो कि तपाइँ, एक इच्छुक पार्टी को रूप मा, मस्यौदा निर्णय को जवाफ मा सक्षम अधिकारीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। अन्तिम निर्णय लिने बित्तिकै अधिकारले अभिव्यक्त गरेका विचारहरू लिन सक्दछ। त्यसकारण मस्यौदा निर्णयको सन्दर्भमा आफ्नो राय बुझाउनु अघि कानूनी सल्लाह लिनु बुद्धिमानी हो।
सब्सिडी दिने अर्थ यो छ कि तपाइँ केही गतिविधिहरु लाई वित्तिय उद्देश्य को लागी एक प्रशासनिक निकाय बाट वित्तीय संसाधन को हकदार हुनुहुन्छ। अनुदान दिने जहिले पनि कानुनी आधार हुन्छ। नियमहरू राख्नुको अतिरिक्त, सब्सिडीहरू एक उपकरण हुन् जुन सरकारले प्रयोग गर्दछ। यस तरिकाले, सरकारले वांछनीय व्यवहारको उत्तेजित गर्दछ। सब्सिडीहरू प्रायः सर्तहरूको अधीनमा हुन्छन्। यी सर्तहरू सरकारले जाँच गर्न सक्छन् कि तिनीहरू पूरा भइरहेका छन् कि भनेर।
धेरै संस्था अनुदानमा निर्भर छन्। यद्यपि व्यवहारमा यो अक्सर हुन्छ कि सब्सिडीहरू सरकारले फिर्ता लिएका हुन्छन्। तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कि सरकारले पछाडि काटिरहेको छ। कानूनी सुरक्षा एक रद्द निर्णयको बिरूद्ध पनि उपलब्ध छ। सब्सिडी फिर्ता गर्न आपत्ति गरेर, तपाईं केहि केसहरूमा सब्सिडीमा तपाईंको हक कायम छ भनेर निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाइँ शंकामा हुनुहुन्छ कि यदि तपाइँको सब्सिडी कानूनी रूपमा फिर्ता लिइएको छ वा तपाइँसँग सरकारी सब्सिडीको बारेमा अन्य प्रश्नहरू छन्? त्यसोभए प्रशासनिक वकिललाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् Law & More। हामी सरकारी अनुदानको सम्बन्धमा तपाईका प्रश्नहरूमा सल्लाह दिन खुसी हुनेछौं।
तपाईंको इलाकामा नियमहरू उल्ल .्घन हुँदा तपाईंले सरकारसँग व्यवहार गर्नुपर्नेछ र सरकारले तपाईंलाई हस्तक्षेप गर्न भन्यो वा उदाहरणका लागि सरकार आयो कि तपाईंले अनुमति शर्तहरू वा अन्य लागू सर्तहरू पालना गर्नुहुन्छ कि भनेर जाँच्न। यसलाई सरकारी प्रवर्तन भनिन्छ। सरकारले यस उद्देश्यका लागि पर्यवेक्षकहरु खटाउन सक्छ। सुपरभाइजरहरूले प्रत्येक कम्पनीमा पहुँच राख्छन् र सबै आवश्यक जानकारी अनुरोध गर्न र निरीक्षण गर्न र प्रशासनलाई आफूसँग लैजान अनुरोध गरिएको छ। यसको लागि नियमहरू भ have्ग भएको गम्भीर शंकाको आवश्यकता पर्दैन। यदि तपाईं यस्तो अवस्थामा सहयोग गर्नुहुन्न भने, तपाईं दण्डनीय हुनुहुन्छ।
यदि सरकारले यो उल्ल .्घन भएको बताएको छ भने, तपाईंलाई कुनै पनि उद्देश्य गरिएको कार्यान्वयनमा प्रतिक्रिया गर्ने अवसर दिइनेछ। यो हुन सक्छ, उदाहरणका लागि, जरिवाना भुक्तानी अन्तर्गतको अर्डर, प्रशासनिक जरिवाना अन्तर्गतको आदेश वा प्रशासनिक जरिवाना। अनुमति कार्यान्वयन उद्देश्यको लागि पनि फिर्ता लिन सकिन्छ।
जरिवाना भुक्तानी अन्तर्गतको अर्डरको अर्थ यो छ कि सरकार तपाईंलाई निश्चित कार्य गर्न रोक्न चाहन्छ वा केही कार्य गर्नबाट रोक्न चाहन्छ, जसमा तपाईं सहयोग गर्नुहुन्न भने तपाईंले ठूलो मोल तिर्नुपर्नेछ। प्रशासनिक दण्ड अन्तर्गतको अर्डर यो भन्दा बढि जान्छ। प्रशासनिक आदेशको साथ, सरकार हस्तक्षेप गर्दछ र हस्तक्षेपको लागतहरू पछि तपाईंबाट दावी गरिन्छ। उदाहरण को लागी, जब यो अवैध इमारत ध्वस्त पार्ने, वातावरणीय उल्ल .्घनको नतिजा सफा गर्ने वा अनुमति बिना व्यवसाय बन्द गर्ने कुरा आउन सक्छ।
यसबाहेक, केहि परिस्थितिमा सरकारले आपराधिक कानूनको सट्टा प्रशासनिक कानून मार्फत जरिवाना तिर्न सक्छन। यसको एक उदाहरण प्रशासकीय ठिक हो। प्रशासनिक जरिवाना धेरै बढी हुन सक्छ। यदि तपाईंलाई प्रशासनिक जरिवाना लगाईएको छ र तपाईं यससँग असहमत हुनुहुन्छ भने, तपाईं अदालतहरूमा अपील गर्न सक्नुहुन्छ।
निश्चित अपराधको परिणाम स्वरूप सरकारले तपाईंको अनुमति रद्द गर्न निर्णय गर्न सक्दछ। यो उपाय सजायको रूपमा लागू गर्न सकिन्छ, तर कार्यान्वयनको रूपमा निश्चित कार्यलाई दोहोरिनबाट रोक्नको लागि।
कहिलेकाँही निर्णय वा सरकारको कार्यले नोक्सान पुर्‍याउँछ। केहि अवस्थाहरूमा, सरकार यस क्षतिको लागि जिम्मेवार छ र तपाईं क्षतिको दाबी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जहाँ तपाईं, एक उद्यमी वा निजी व्यक्ति, सरकारबाट क्षतिको दाबी गर्न सक्नुहुन्छ।
सरकारको गैरकानूनी कार्य
यदि सरकारले गैरकानुनी ढंगले कार्य गरेको छ भने तपाईले भोग्नु भएको कुनै पनि क्षतिको लागि तपाई सरकारलाई उत्तरदायी राख्न सक्नुहुन्छ। अभ्यासमा, यो एक गैरकानूनी सरकारी कार्य कहलाइन्छ। यो केस हो, उदाहरणका लागि, यदि सरकारले तपाईंको कम्पनी बन्द गर्‍यो, र न्यायाधीशले निर्णय गरे कि यो हुने अनुमति छैन। एक उद्यमीको रूपमा, तपाईं सरकारले अस्थायी बन्दको परिणामस्वरूप तपाईंले सामना गर्नु भएको आर्थिक नोक्सान दाबी गर्न सक्नुहुन्छ।
सरकारको वैधानिक कार्य
केहि केसहरूमा, यदि तपाई सरकारले वैधानिक निर्णय गरेको छ भने तपाईलाई क्षति पनि आउन सक्छ। यो मामला हुन सक्छ, उदाहरणका लागि, जब सरकारले जोनिंग योजनामा ​​परिवर्तन गर्दछ, जसले निश्चित भवन परियोजनाहरूलाई सम्भव तुल्याउनेछ। यो परिवर्तनले तपाईंको व्यवसायबाट तपाईंको लागि आम्दानी गुमाउन वा तपाईंको घरको मूल्यमा कटौती गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा, हामी योजना क्षति वा घाटा क्षतिपूर्तिको क्षतिपूर्तिको कुरा गर्दछौं।
हाम्रो प्रशासनिक वकिलहरु एक सरकारी कानून को परिणाम को रूप मा क्षतिपूर्ति प्राप्त को सम्भावनाहरु को बारे मा तपाईंलाई सल्लाह गर्न खुशी हुनेछ।
आपत्ति र अपील
सरकारको निर्णयको बिरूद्ध आपत्ति प्रशासनिक अदालतमा पेश गर्न सक्नु अघि, एउटा आपत्ति प्रक्रिया पहिले गर्नुपर्नेछ। यसको मतलव तपाईले छ हप्ता भित्र लिखित रूपमा संकेत गर्नुपर्दछ कि तपाइँ निर्णय र यस कारणले तपाइँ सहमत हुनुहुन्न सहमत हुनुहुन्न। आपत्ति लिखित रूपमा हुनु पर्छ। ईमेलको प्रयोग मात्र सम्भव छ यदि सरकारले स्पष्ट रूपमा यो संकेत गर्यो। टेलिफोन द्वारा एक आपत्ति एक आधिकारिक आपत्ति मानिदैन।
आपत्तिको सूचना पेश गरिसकेपछि, तपाईंलाई प्राय: मौखिक रूपमा तपाईंको आपत्ति बुझाउने अवसर दिइन्छ। यदि तपाईं सहि प्रमाणित हुनुभयो र आपत्ति राम्रोसँग स्थापित भएको घोषणा गरियो भने, प्रतिस्पर्धा गरिएको निर्णय उल्टाइनेछ र अर्को निर्णयले यसलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। यदि तपाईं सही साबित भएन भने, आपत्ति निराधार घोषणा गरिनेछ।
आपत्तिबारेको निर्णयको बिरूद्ध अपील पनि अदालतमा दायर गर्न सकिन्छ। अपील पनि लिखित रूपमा। हप्ताको अवधिमा बुझाउनु पर्छ। केहि अवस्थाहरूमा यो डिजिटल रूपमा पनि गर्न सकिन्छ। यसपछि अदालतले सरकारी एजेन्सीलाई मुद्दा सम्बन्धी सबै कागजातहरू पठाउन र बचावको बयानमा जवाफ दिन अनुरोध गरी अपीलको सूचना पठाउँदछ।
सुनुवाई पछि निर्धारित हुनेछ। अदालतले त्यसपछि मात्र आपत्तिको बारेमा विवादित निर्णयमा निर्णय गर्नेछ। तसर्थ, यदि न्यायाधीश तपाईंसंग सहमत छन् भने, उसले केवल तपाईंको आपत्तिको निर्णय रद्द गर्दछ। यसैले प्रक्रिया अझै समाप्त भएको छैन। सरकारले यो आपत्ति मा नयाँ निर्णय दिनु पर्छ।
प्रशासनिक कानून मा म्याद
सरकार द्वारा निर्णय पछि, तपाईं एक आपत्ति वा अपील दर्ता गर्न छ हप्ता छ। यदि तपाइँ समय मा आपत्ति छैन भने, तपाइँको निर्णय को बिरूद्ध केहि गर्न को लागी मौका दिईन्छ। यदि कुनै निर्णयको विरुद्धमा कुनै आपत्ति वा अपील दर्ता गरिएको छैन भने, यो औपचारिक कानुनी बल दिइनेछ। यो त्यसपछि यसको सिर्जना र सामग्री को मामला मा दुबै कानूनको रूपमा मानिन्छ। आपत्ति वा अपील पेश गर्नको लागि सीमा अवधि वास्तवमा छ हप्ता हो। त्यसकारण तपाईंले निश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाईं कानुनी सहायता समयमै संलग्न हुनुहुन्छ। यदि तपाईं कुनै निर्णयसँग असहमत हुनुहुन्छ भने, तपाईंले weeks हप्ता भित्र आपत्ति वा अपीलको सूचना पेश गर्नुपर्नेछ। को प्रशासनिक वकिल Law & More यस प्रक्रियामा तपाईंलाई सल्लाह दिन सक्छ।
हामी प्रशासनिक कानूनको सबै क्षेत्रमा तपाईका लागि मुद्दा लगाउन सक्छौं। उदाहरणका लागि, कुनै भवनको रूपान्तरणको लागि वातावरणीय अनुमति प्रदान गर्न असफल भएको सम्बन्धमा जरिवाना तिर्ने वा मुद्दा दायर गर्ने आदेशको लागी नगरपालिका कार्यकारीलाई आपत्ति जनाएको सूचना पेश गर्ने सोच्नुहोस्। सल्लाहकार अभ्यास हाम्रो कामको एक महत्त्वपूर्ण अंश हो। धेरै केसहरूमा सही सल्लाहका साथ तपाई सरकार विरुद्ध कारवाही रोक्न सक्नुहुन्छ।
हामी अन्य चीजहरूको बीचमा तपाईंलाई सल्लाह दिन र मद्दत गर्न सक्दछौं:
Ies सब्सिडीको लागि आवेदन;
• एक लाभ जुन रोकिएको छ र यस लाभको पुनः प्राप्ति;
An प्रशासनिक जरिवाना लगाइन्छ;
Environmental एक वातावरणीय परमिट को लागी तपाइँको आवेदन को अस्वीकृति;
Its परमिटहरूको खण्डनको लागि आपत्ति दर्ता गर्दै।
प्रशासनिक कानूनमा कार्यवाही अक्सर वास्तविक वकिलको काम हुन्छ, जबकि कानून मा एक वकील द्वारा सहयोग अनिवार्य छैन। के तपाईं सरकारी निर्णयसँग असहमत हुनुहुन्छ जुन तपाईंको लागि सुदूर परिणामहरू हुन्? त्यसपछि प्रशासकीय वकिलहरु लाई सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More सिधा हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दछौं!